कोरोना त आउँछ जान्छ तर मुख्य कुरा अर्को छ
धैर्य गर्नुपर्छ, ऐले तनाव लिने, आत्तिने र भौतारिने बेला होइन ! चिन्तन गर्नुपर्छ, चिन्ता भने पटक्कै गर्नु हुँदैन । हामी जतिसुकै ठुलो भौतिकवादी भएपनि यसबेला भागवत गीताको सारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने ठाउँमा उभिएका छौं । गीताले भन्छ – ‘हे मनुष्य, तिमी व्यर्थमा किन चिन्तित हुन्छौ ? तिमी जन्मदा एक्लै जन्मिएका हौ । मर्दा एक्लै मर्नेछौ ।
आजसम्म तिमीले कमाएको सम्पति, घर, गाडी वा यस्तै भौतिक चिजहरुको प्राप्तिमा अहंकार गर्छौ नि, यी चिज तिम्रा होइनन् ! यसलाई हिजो कसैले उपयोग गर्थे, भोली अरु कसैले गर्नेछन् ! तिमी जे जे बस्तुलाई मेरो भनेर लोभिएकाछौ, यी सबै अस्थाई हुन् ! तिमीले धरतीमा जन्मिएर आएपछी उपयोग गरेकामात्र हौ । न की,जन्मिदा नै लिएर आएका हौ !
तिमी मर्दा यी भौतिक चिजहरु सबै यहीं छोडेर जानेछौ ! अर्थात, तिम्रो जीवन भनेको वर्तमान हो । जुनबेला जस्तो परिस्थिति आउँछ सहजै स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ ! तब मात्र तिमी जीवन पर्यन्त खुशी रहन सक्नेछौ ! यस घडीमा हामीले ‘गीता सार’बाट ठ्याक्कै के सिक्ने त ? ऐलेसम्म कोरोनाको ओखती बनेको छैन। हाम्रो शरीरमा नबस भन्दा मान्दैन !
यसर्थ आफ्नो क्षमता भन्दा माथिको समस्या वा अवसरमा डराउनु पनि हुँदैन, लोभिनु पनि हुँदैन ! जति प्रयत्न गरेपनी परिणाम आफ्नो पोल्टामा आउँदैन ! हिजो सहजताका बेला हामीमा लोभ, मोह र अहंकार मौलाएर आकासिएको छ ! यसलाई आत्मचिन्तन गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो मन रातारात कमाउने धन्दामा बहकिएकोछ ! अहंकारले बढाउने भनेको दुरासय, दुष्कर्म नै हुन् ।
यसलाई सदासयता, सत्कर्ममा बदल्नु पर्छ । असहिष्णुता बैरभावले मानवीयता खोसेको छ । यसलाई मैत्रीभाव र सहिष्णुतामा बदल्नु पर्छ । समग्रमा मनाव जगतका निम्ति यो चुनौती मात्र होइन, एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । जसले हाम्रो सोच, आचारण, जीवनशैली, रहनसहनमा नयाँ आयाम थप्न सक्नेछ । धन्यबाद । यो खबर चर्तिच हास्य कलाकार मजोज गजुलेर दाइ को वेबसाईट बाट जस्ताको तेस्तै साभार